Ukuqhathaniswa kwemizila yenqubo yokukhiqiza eMkhakheni weBOPET
ngu admin ngo 20-08-21
Okwamanje, kunemizila emi-2 ehlukene yokukhiqiza embonini yeBOPET, enye inqubo yokusikeka, enye iyancibilika ngokuqondile. Ngaphambi kuka-2013, imakethi yayisuselwa kakhulu kwinqubo yokusikeka, kuthi ngemuva konyaka ka-2013, kwethulwe inqubo yokuqoqa imihlambi. Ngokwezibalo zikaZhuo Chuang, ekupheleni kwe ...
Isimo Esikhona Njengamanje kanye nethemba le-PTA Chain kanye neMakethe
I-PX iyinto ehamba phambili eluhlaza okhiqizayo embonini yonke ye-polyester, Ukushintshwa komkhakha wayo kunomthelela obaluleke kakhulu kuyo yonke imboni ethile. ukungena ngokusemthethweni ekuthuthukisweni kokuzanelisa kweChina eXylene Road Research. Okokuqala, bhekisisa ukunikezwa kwe-PX yomhlaba wonke kanye noku ...
Izinto ze-Genzon Novel Equipment, ezihambela i- "2019 Suqian Green Industry Expo"
Ngomhlaka 28 kaSepthemba, umcimbi wasendaweni we-2019 Suqian Green Industry Expo wabanjelwa ukuvulwa okukhulu esikhungweni saseSuqian Exhibition. Ingqikithi yale Green Fair ithi "luhlaza, ukuhlanganiswa nokugxuma", Gxila embonini eluhlaza kanye nomnotho wezemvelo ukwenza izingxoxo zezomnotho nezokuhweba ...
IPhini likaMbusi weSifundazwe saseJiangsu vakashela iGenzon Novel Equipment
NgoSepthemba 25, Ingqungquthela Yokwakhiwa Kokuphakanyiswa Kwokwakhiwa Kwephrojekthi Yesifundazwe iJiangsu yesiFundazwe yabanjelwa eSuyy County, eShuqian City. Umhlangano ububheke kakhulu kumazinga asezingeni lesifundazwe nawokwakha okugxile ekukhiqizweni komhlangano wokuncoma. Abahamba kahle esifundazweni ...
I-ISO9001: Ikhwalithi Yokuqeqeshwa Kwekhwalithi Ejwayelekile Yokulawulwa Kwekhwalithi ye-2015
NgoDisemba 13, i-GENZON Novel Equipment yaqhuba izinsuku ezimbili zokuqeqeshwa okujwayelekile kwenguqulo yango-2015 yohlelo lokulawulwa kwekhwalithi. Sebebonke abantu abangama-48 abahlanganyele kulokhu kuqeqeshwa. Indawo yokuqeqesha Ekuqaleni komhlangano, Mnu. Zhang Tao, osebenza ngokubonisana nabasebenza eValin, okokuqala wanikeza ...
Kusukela i-Genzon Novel Equipment iqeda ukuhlanganisa kabusha kanye nokuhlelwa kabusha kwezimpahla futhi ibona ukuqalwa okubushelelezi kokwenza umugqa wokukhiqiza, ngakolunye uhlangothi…
Njengoba i-Genzon Novel Equipment isiphothule ukuhlangana futhi kwahlelwa kabusha kwezimpahla futhi yabona ukuqala okuhle kokwenza umugqa wokukhiqiza, ngakolunye uhlangothi, iGenzon igxile ekwazisweni kwethalente eliphakeme lobuchwepheshe, ukusungulwa koHlelo noHlelo lokuqeqeshwa kwabasebenzi ngakolunye uhlangothi, yenza uphawu olusha ...
ISuyyang Genzon Novel Equipment Co, Ltd